XOG: Fakashada Axmed Madoobe Iyo Fashilka Nabad & Nolol (Qorsheyaal Cusub) -News and information about Somalia
Home News XOG: Fakashada Axmed Madoobe Iyo Fashilka Nabad & Nolol (Qorsheyaal Cusub)
XOG: Fakashada Axmed Madoobe Iyo Fashilka Nabad & Nolol (Qorsheyaal Cusub)
Maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland ayaa hadda u muuqanaya mid kasii fakana Nabad iyo Nolol oo lala yaaban yahay markaan waxa helay qorsheyaasheedii lama gafaanka ah.
Axmed Madoobe ayaa ku guuleystay arrimo badan, iyadoo maantana ayba doorasho ka dhaceyso magaalada Kismaayo.
Nabad iyo Nolol oo maciin biday Shisheeye, ayaa hadana guuleysan weysay, waana waxa lala yaaban yahay oo taariikh mugdi ah ku noqon doona nabad iyo nolol.
Dadka qaar ayaa qaba in Nabad iyo Nolol aanay sidan ku quusan doonin oo ay qorsheyaal kale damacsan tahay.
Qorsheyaasha waxaa ka mid ah in dagaal uu ka dhaco Kismaayo si doorasho aanayba halkaasi uga dhicin.
Waxaa la ogaan doonaa wax walbo Khamiista soo aaddan oo ay ku beegan tahay doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland.
Previous articleSuaalo laga keenay Qaabkii loo dilay 4 Qof oo shalay Booliska ku toogteen Suuqa Bakaaraha [Akhriso]
Next articleDEG DEG: Guddoomiyihii Baarlamaankii hore ee Jubbaland oo dib loo doortay